Imibandela Yezimo - I-DataKit Studio
Le webhusayithi ikunikeza amathuluzi amahle kakhulu wokubuyisa idatha ye-ios. Senza ulwazi nemikhiqizo kutholakale kuwe kule webhusayithi, ngokuya ngemibandela elandelayo nemibandela. Ngokufinyelela le webhusayithi uvumelana nale migomo nemibandela. I-SafeKit Studio inelungelo lokufuna zonke izisombululo emthethweni nangokulingana kunoma yikuphi ukwephulwa kwale migomo nemibandela. Noma imaphi amalungelo angenikezwe ngokuqondile agodliwe.
ios-data-recovery.com ithatha ubumfihlo bakho kakhulu. Asisabalalisi noma yiluphi ulwazi lomuntu siqu kubantu besithathu. Kunobungozi obukhona ekusebenziseni noma iyiphi i-Software etholakalayo ukulanda ku-Intanethi, futhi i-DataKit Studio kulokhu ikuyala ukuthi uqiniseke ukuthi uziqonda ngokuphelele zonke izingozi ngaphambi kokulanda noma iyiphi i-Software (kufaka phakathi ngaphandle komkhawulo, ukutheleleka okungenzeka kwakho uhlelo ngamagciwane ekhompyutha kanye nokulahleka kwedatha). Nguwe kuphela obhekele ukuvikela okwanele kanye nokusekelayo kwedatha nemishini esetshenziswayo maqondana nanoma iyiphi iSoftware.
Onke ama-logo, izikrini ezigoqekile, izihloko zamakhasi, izithombe kanye nemifanekiso eboniswe kuleli sayithi yizimpawu zensizakalo, uphawu lwentengiso, kanye / noma ingubo yokuhweba (bebonke, "Amamaki") beDathaKit Studio noma labo abanamalayisense avela eceleni .. Ngaphandle kokuthi kuvunyelwe lapha. ukusebenzisa, ukukopisha, ukudlulisa, ukubonisa, ukuguqula noma ukusabalalisa noma yimaphi amaZimpawu nganoma yiluphi uhlobo noma nganoma yiziphi izindlela ngaphandle kwemvume ebhalwe phansi ye-DataKit Studio kuvinjelwe futhi kungahle kwephule ilungelo lobunikazi, uphawu lwentengiso, ubumfihlo noma eminye imithetho yase-United States kanye / noma eminye amazwe.
Uyavuma ukuvikela, ukukhipha kanye nokubamba i-DataKit Studio, abaxhumana nayo kanye nabaphathi bayo, abaqondisi, ama-ejenti nabasebenzi abangenabungozi kunoma yikuphi futhi ukubanga konke, ukulahleka, ukulimala, izikweletu, izindleko nezindleko, kufaka phakathi imali yabameli, evela noma ehlobene kokuqukethwe kwakho komsebenzisi, ukusetshenziswa kwesiza, noma ukwephulwa kwanoma iyiphi yale migomo.
Noma imiphi imibono noma izinto ezithunyelwe ku-DataKit Studio, kubandakanya ngaphandle kwemikhawulo, efana nemibuzo, imibono, iziphakamiso noma yiluphi ulwazi oluhlobene mayelana neSoftware, le webhusayithi noma eminye imikhiqizo, izinhlelo noma izinsizakalo ze-DataKit Studio ("Impendulo"), izoba kuthathwa njengokungeyona imfihlo. IStudioKit Studio ngeke ibe nesibopho sanoma yiluphi uhlobo maqondana Nempendulo enjalo futhi izokhululeka kabusha, isebenzise, ​​iveze, iveze, ibonise, iguqule, idale imisebenzi esusayo futhi isabalalise Impendulo kwabanye ngaphandle kokuvinjelwa futhi izokhululeka ukusebenzisa noma imiphi imibono , imiqondo, ukwazi noma amasu aqukethelwe kuleyo Impendulo nganoma iyiphi inhloso, kufaka phakathi kepha kungagcini ekuthuthukiseni, ekhiqizweni nasekukhangiseni imikhiqizo efaka leyo Mpendulo.
Noma yikuphi ukukhiqizwa okugunyaziwe kwanoma yiluphi ulwazi oluqukethwe lapha kufanele lufake izaziso ze-copyright, uphawu lwentengiso noma ezinye izinganekwane zokuphathelene ze-DataKit Studio, kunoma yiliphi ikhophi lezinto ezenziwe nguwe. Ilayisense leSoftware nokusebenzisa le webhusayithi liphethwe yimithetho yase-United States.
I-copyright kule webhusayithi (kufaka phakathi ngaphandle komkhawulo, umbhalo, ihluzo, amalogo, imisindo nesoftware) iphethwe futhi inamalayisense yi-DataKit Studio. Zonke izinto eziqukethwe kulesi siza zivikelwe yi-United States kanye nomthetho wamalungelo obunikazi bamazwe omhlaba futhi kungenzeka zingakopishwa, ziphinde zithunyelwe, zisatshalaliswe, zikhonjiswe, zishicilelwe, noma ziphathwe nganoma iyiphi indlela noma nganoma iyiphi indlela noma kunoma iyiphi imidiya ngaphandle kokubhala kwangaphambilini imvume ye-DataKit Studio. Awungeke uguqule noma ususe noma yiliphi ilungelo lobunikazi noma esinye isaziso kumakhophi wokuqukethwe.